ENTSHA! Iyunithi yokulala eyi-2 eStylish-Isidlo sakusasa-Wifi
Indawo yethu ebanzi kwaye ehonjiswe ngokunambitheka inokuba lulungiselelo lwakho lwesidlo sakusasa sexeshana sasekhaya esibandakanyiweyo.
Indawo yethu ebanzi ineplani yangoku evulekileyo, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuphumla, i-1 okanye i-2 yokulala enobutofotofo, ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho, igumbi lokuhlambela elithandekayo kunye nempahla eyahlukileyo enewasha yomthwalo ogcweleyo ngaphambili kunye nesomisi!
Incwadi yokulala enye okanye omabini, ukhetho lolwakho (jonga ngezantsi). Undazise nje.
Pls Musa ukubhukisha iyunithi yethu ngaphandle kokuxoxa ukuba ungowasekhaya.
Igumbi lokulala 1: Ibhedi ye-Deluxe ye-Queen ene-chic charcoal kunye ne-navy decor. Igumbi libandakanya ifeni kobo busuku bushushu, iitafile ezisecaleni kwebhedi kunye nezibane - zilungele ukufundwa kwasebusuku kakhulu!
Igumbi lokulala lesi-2: iibhedi ezikhululekileyo ezingamawele, ezihonjiswe kwi-hue yangoku ye-mint ethambileyo kunye nemhlophe entsha ukwenza uzive ukwindawo yokubalekela etropiki! Eli gumbi likwanefeni, itafile esecaleni kunye nesibane.
IBHAFU: indawo engamampunge ebanzi, indlu yangasese, ishawari kunye nebhafu yobungakanani obugcweleyo ukuze uphumle emva kosuku lokuhamba kunye nokuhlola.
4.93 out of 5 stars from 658 reviews
4.93 · Izimvo eziyi-658
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi658
Ukufikelela ngokulula kwiFreeway malunga nemizuzu emi-4. Ukuhamba ngemizuzu emi-2 ukuya eSpringdale Heights Tavern, ivenkile yebhotile, iChemist Warehouse, IGA kunye nendawo enkulu yePizza. Imizuzu emi-5 yokuqhuba ukuya kwindawo yokuthenga yaseLavington Square.
Imizuzu eyi-8 ukuya kwisibhedlele sasekhaya. ISitrato saseDean siSitrato sethu esiPhakathi kumbindi we-Albury 8-10 imizuzu iya kukugubungela. IYunivesithi yaseCharles Sturt nayo ikufutshane. Idama laseHume, iigadi zebhotani kunye neNorieul Park zizinto ezimbalwa zasekhaya ezifanele ukutyelelwa.
Andihlali kwipropathi kodwa ndikumizuzu nje ukuya. Kungaqhagamshelwana naye ngo-Airbnb okanye ngeselula yam.